12 Qaybaha Guriga ee Xasaasiga ah | Martech Zone
Hubspot hubaal waa hogaamiyaha wadista waxyaabaha si loo wado istiraatiijiyad suuq geyn ah, weligay ma arag hal shirkad oo soo saartay cadad badan, demo iyo ebook. Hubspot hadda samatabbixin ah infographic 12ka cunsur ee muhiimka u ah bogga.
Bog internet wuxuu u baahan yahay inuu xirto koofiyado badan una adeego dhagaystayaal badan oo ka kala yimid meelo badan oo kala duwan. Waxay uga duwan tahay bog degitaan gaar ah, halkaas oo taraafikada kanaal gaar ah la siinayo farriin gaar ah oo ay ku qaaddo tallaabo gaar ah. Bogagga degitaanku waxay leeyihiin sicir beddelaad sarreeya maxaa yeelay waa la bartilmaameedsadaa oo waxay aad ugu habboon yihiin booqdaha.
Waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna sidii aan u dhisi lahayn xeeladaha suuq-geynta ee soo-galaya… waana inaan iraahdaa sidaas ayaan qabaa Hubspot waxaa seegay calaamadda ku qoran sawir-gacmeedkan… waxaa jira waxyaabo aad u muhiim ah iyo istaraatiijiyado seegay boggan:
Macluumaadka xiriirka - wicitaan-ka-ficil waa qaybo macluumaad muhiim ah, laakiin qof kastaa ma doonayo inuu dhagsiiyo demo ama ilo dheeri ah. Mararka qaarkood macmiilkaagu wuxuu diyaar u yahay inuu iibsado oo uu si fudud ugu baahan yahay a lambarka taleefanka or foomka saxiixa si aad u bilowdo.
Naqshadaha Bulshada - ahmiyadda ay baraha bulshada u leedahay kobcinta macmiil lama dhayalsan karo. Mararka qaarkood dadka waaweyni waxay ku soo degi doonaan bartaada, laakiin iyagu si fudud diyaar uguma aha inay iibsadaan weli… markaa way kula socon doonaan Facebook, Google+ ama Twitter si ay si fiican kuubaranayaan.
Rukunka Warsidaha - waxaa laga yaabaa in qaybta ugu yar ee la yaso ee bog kasta ay tahay rukhsadda warsidaha. Bixinta hab loogu talagalay rajada ah in la galo cinwaanka emaylkooda oo si isdabajoog ah loo noqdo taabtay la news, dalabyada iyo macluumaadka ka brand aad waa qaali. Qabsashada cinwaanka emaylku waa mid qiimo leh - hubi inay fududahay oo iska cad tahay boggaaga.
Waxaan ku doodi lahaa isticmaalka ereyga muuqaalada sidoo kale # 5 sidoo kale. Waa la caddeeyey in ka badan iyo in ka badan oo adeegsadayaashu ay ka badan yihiin soo jiitay faa'iidooyinka halkii laga heli lahaa astaamaha. Ka hadlida warbixinta cusub ee fangaska ah muhiim ma ahan… laakiin muujinta xogta waxqabadka leh ee aad soo bandhigeyso si shirkadu lacag u hesho waa!
Ugu dambeyntiina, boggaaga waa in loo hagaajiyaa ereyada muhiimka ah ee tilmaamaya boggaaga si habboon oo loo hubiyo in bartaada la helo maaddaama ay ku korayso caan. SEO waa inuu had iyo jeer door ka ciyaaraa naqshadeynta boggaaga iyo horumarkaaga.
Tags: waxyaabaha loogu talagalay bogganaqshadeynta boggawalxaha boggasida loohubsasho
Hadalka Bilaashka Ah Ma Ilaalinayo Sumcaddaada
Waxaan nahay Top 10 Blog Bulsho Bulsho!
Si run! oo laba maalmood uun ka dib ayaa laga helay cusboonaysiinta Google ee ku saabsan muhiimadda ay leedahay degsiimooyinka bogagga. Markaa haddii qof uu wado olole is-hagaajin ka baxsan bogga, Waa muhiim in la helo liistada saxda ah ee ereyada muhiimka ah iyo bog habboon oo ereyadaas muhiimka ah ay na geyn doonaan ..
Jan 31, 2012 saacadu markay ahayd 12:56 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada. Waxaan mar labaad kuugu jiraa qodobkaaga ku-qoritaanka warsidaha! Waxay ila yaabaysaa sida aan wax ugu qodayo si aan uga helo rukumo shirkadaha aan doonayo inaan ka maqlo.
Jan 31, 2012 saacadu markay ahayd 5:18 PM
Waxaan ku raacsanahay in waxyaabaha ugu waawayn ee ka maqan boggan ay yihiin astaamaha bulshada. Waxaan aaminsanahay inay jiraan laba nooc oo astaamaha warbaahinta bulshada ah oo ku yaal bog kasta — mid shirkadda, sheyga ama shabakadda guud iyo mid kale oo loogu talagalay bogga gaarka ah ama maqaalka isticmaalaha uu booqanayo.